Ikhaya > Iimveliso > Ifanitshala yomlenze > Umlenze weTafile
Umlenze wensimbi ojikelezayo xa uthelekisa iimveliso ezifanayo kwintengiso, ineengenelo ezingenakuthelekiswa nanto ngokwendlela yokusebenza, umgangatho, imbonakalo, njl njl. . Inkcazo yomlenze wefanitshala enesinyithi inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.
I-O-Rings i-SOAF ye-SOFOD yensimbi ye-Infor yeBig yeBig kwi-Operth Shoreware nge-Craft ye-Odd kunye nexabiso leNkqubo yokuSebenza yeHinge kunye nenkonzo yokumisa impahla enye ye-HIGE.
I-Tilling / ifanitshala eyenziwe ngefanitshala
Imveliso isetyenziswa ngokubanzi kwii-upplstery, ezonyango, ukupakisha, ulwakhiwo, isambatho, ezolimo, ukhathalelo lwempilo okanye ezinye iinkqubo.
I-1.ayintWaT uyinkampani okanye umvelisi?
2.Inini ngumthamo wokulayisha kwe-20ft yesikhongozeli kwaye kunokwenzeka ukuba ulayishe iimveliso zokuxuba kwisitya esinye?
3.Yintoni ikota yokuhlawula?
I-1.Excellent emva kwenkonzo yokuthengisa: Sinikezela simahla kwaye sigqwesile emva kwenkonzo ukuba zithengiswe zonke izinto, ukuba kukho ukuzithoba kuthi, siza kuyicombulula le ngxaki emva kokuba unike ubungqina bolwazi kwangaphambili.
2.Free isampula: Sibonelela ngezisampulu zasimahla ngokusekwe kwiimfuno zakho ezithile zokuhlola umgangatho weemveliso zethu. Kubalulekile ukuba sifumane into oyifunayo ngokuchanekileyo.
3. Ukuhanjiswa: Siyathembisa iodolo yakho iya kuthunyelwa ngaphakathi kwinyanga enye emva kokufumana idipozithi. Ngexesha lexesha elixakekileyo, ixesha lethu elinokuthi lifunelwe lihlengahlengiswa ngokufanelekileyo. Ukoneliseka kwakho ngokupheleleyo kubaluleke kakhulu kwiqela lethu.
W80 * I-80mm
H100mmm, H120mm, H150mm, H150mm, H15MM, H200MM, H200MM, H200MM
Mnyama ngegolide, igolide, emnyama, i-chrome
Iisampulu ziya kulungela ukuthumela malunga neentsuku ezintathu zomsebenzi ngokubonisa ukuba i-DHL, i-UPS, i-TRT, FedEx okanye i-EMS
1. Iveliswe ngentsimbi esemgangathweni ephezulu njengezixhobo eziluhlaza, i-vacuum efanelekileyo yokubeka i-vacuum, esenza ukuba ichukumise ichukumisa kwaye inamandla okuxhathisa i-sprasion yetyuwa.
2. Inkqubo ephezulu yobushushu eWelding, i-dap ye-Welding ayinantsingiselo yokwaphula, izilangazelelo eziqinileyo, uzinzo oluqinileyo, isiphumo esiphezulu somthwalo.
3. Ixhotywe nge-anti-slip yeplastiki yokuphepha ukonakalisa umhlaba kwaye isuse isandi se-nosy esinokuzisa amava akho angcono.
4. Isicelo sendawo ezinamasiko, silungele ukumiswa kweTV esinamandla, iSoba ye-Sofa Count, i-Couch, i-Couch Coundlife, i-Sofa Cobet, iSoba yeSoba esekwe, njl.
5. Ubungakanani obahlukeneyo kunye nemibala ziyafumaneka ngokukhetha ukukhetha impahla yakho.
6. Imbonakalo yokubonakala ilula neyimfashini ayiphelelanga sisitayile esihonjisiweyo, kwaye iindlela ezahlukeneyo zinokusetyenziswa ngokugqibeleleyo.